BUKA: I-Universal Drops Chilling New 'Candyman' Trailer ne-Poster
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo BUKA: I-Universal Drops Chilling New 'Candyman' Trailer ne-Poster
by Waylon Jordan June 23, 2021
UCandman uyeza! AbakwaNia DaCosta umbono omusha owesabekayo wesithonjana se-90s horror – esikhiqizwe ngu Jordan Peele- kulindeleke ukuthi ingene eshashalazini ngo-Agasti 27, 2021, kanti namhlanje ekuseni i-Universal ilahle itrailer entsha nobuciko bephosta ukusilungiselela okuzayo.
Izindaba zifika ne-synopsis ende ongayifunda ngezansi:
Uma nje izakhamizi zingakhumbula, amaphrojekthi wezindlu asendaweni yaseChicago yaseChabrini-Green asatshiswa ngendaba yesipoki ngomlomo onamandla angaphezu kwemvelo ophethe ingwegwe yesandla, obizwa kalula yilabo abanesibindi sokuphinda igama lakhe amahlandla ayisihlanu isibuko. Osukwini lwethu, eminyakeni eyishumi ngemuva kokudilizwa kwemibhoshongo yokugcina yaseCabrini, umculi obukwayo u-Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; Abalindi be-HBO) nomlingani wakhe, umqondisi wegalari uBrianna Cartwright (Teyonah Parris; Uma iBeale Street Ingakhuluma), uthuthele endaweni ephakeme yokuphakama e-Cabrini, manje eseyenziwe yaba mnandi ngaphezu kokuqashelwa futhi yahlala izinkulungwane zeminyaka ezihamba phambili.
Ngomsebenzi wokudweba ka-Anthony onqenqemeni lokumiswa, ukuhlangana nethuba lesikhathi esidala seCabrini-Green (Colman Domingo; Isizwe Sokubulala) kuveza u-Anthony esimweni esibuhlungu sendaba eyiqiniso ngemuva kukaCandyman. Ekhathazekile ngokugcina isikhundla sakhe emhlabeni wobuciko waseChicago, u-Anthony uqala ukuhlola le mininingwane emikhulu estudiyo sakhe njenge-grist entsha yokudweba, ngokungazi evula umnyango wesikhathi esidlule esiyinkimbinkimbi esivula ingqondo yakhe futhi siveze igagasi elisabekayo lodlame olumbeka enkambweni yokushayisana nesiphetho.
Okuhehayo yindlela ifilimu ephinda iqondise ngayo indaba kaCandyman ngenkathi isabambe umoya wenganekwane evela kwifilimu yokuqala.
UCandman kusekelwe endabeni kaClive Barker enesihloko esithi “Okungavunyelwe.” Lapho abenzi bamafilimu bethatha isinqumo sokuyiguqula le ndaba, basusa isenzo eLondon baya eChicago futhi bakha i-backstory enanela ezinye izingxenye ezimnyama zesikhathi esedlule saseMelika. Kwakungekho ngaphandle kokugxekwa kwayo ngaleso sikhathi, kepha umlingiswa nefilimu yokuqala ihlala isinye sezibonelo ezikhanyayo zezinto ezinhle kakhulu ezingama-90s.
Bheka okusha UCandman i-trailer engezansi, futhi usazise uma uzobe ubukele lapho ingena kumatiyetha ngo-Agasti!
UCandmanclive barkerJordan PeeleI-Nia DaCostaUniversalWaylon Jordan
'Umfana Osemuva Komnyango' Izindawo Ze-trailer Zokuthumba Ekugxileni Okuthusayo
Phola Phansi ngalezi Chilling Shudder ezikhishwa ngoJulayi 2021